Madaxweyne Obama oo safiir u soo magacaabay Soomaaliya – Radio Muqdisho
Madaxweyne Obama oo safiir u soo magacaabay Soomaaliya
Madaxweynaha Dalka Mareykanka Brack Obama ayaa safiirkii ugu horreeyay ee mareykan ah u magacaabay Soomaaliya tan wixii ka dambeeyay bur burkii dalka ka dhacay, taasi oo lagu magacaabo Danjire Katherine S. Dhanani.
Afhayeenka Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay ka turjumeyso xiriirka qotoda dheer ee uu Mareykanka la yeelanayo Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ay u talaabsatay in ay kaga gudubto colaad dabo dheeraatay oo ragaadisay horumarkii dalka.
Jen Psaki ayaa tilmaamtay inay dib u furanayaan safaaraddii ay ku lahaayeen Soomaaliya, si loo xoojiyo xiriirka labada dal ka dhexeysa, taasi oo ay ku sheegtay in tahay mid taariikhi ah, balse ay si kumeel gaar ah ugu shaqeyn doonto magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, inta laga diyaarinayo xarunta Safaaradooda.
Safiirka cusub ee Mareykanka uu u soo magacaabay Soomaaliya Katherine Dhanani ayaa ah diblumaasi khibrad dheer u leh arrimaha Qaaradda Afrika, iyadoo ka soo shaqeysay wadamo badan oo ay ka mid yihiin India, Mexico, Zimbabwe, Gabon, Zambia iyo Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Konga.
Shir looga hadlayo xoojinta amniga oo xalay lagu qabtay Muqdisho